Jikọọ ndị ọkwọ ụgbọala na-agba izu. Akpa ule anyị bara uru
Malite Baby & Nwa Oge ntụrụndụ na njem Kombikinderwagen
1 Onye na-eme njem na-adọkpụ - ụzọ dị irè maka iga maka nwatakịrị
2 The na-agbagha ụgbọala - nke patent 3in1 nlereanya
3 Ndị na-agba ígwè - ọ ga - esi mee ya
4 Kombikinderwagen - nke a ga-atụle na ịzụta
5 Kombikinderwagen - ọtụtụ uru
6 Kombikinderwagen - enwere ike inwe ọghọm
7 Ndị na-agba ígwè - ebe eji ya
8 Ngwongwo nke oge a - na-elezi anya ngwa ngwa na ego
9 Kombikinderwagen - nchekwa nchekwa ogige maka ịkwaga nwatakịrị
Onye na-eme njem na-adọkpụ - ụzọ dị irè maka iga maka nwatakịrị
Mgbe akpatre nke atọ nke afọ ime na-eru, ọtụtụ ndị nne na-atụ anya na-emeri ezigbo ego na-akwụ ụgwọ, na ọbụna taa, ihe nkedo kwesịrị ekwesị bụ otu n'ime ihe dị mkpa dị mkpa maka nwa ahụ. Ọ bụrụ na ị kwenyesighị ike mgbe ịzụtara ihe ndina, ọ bụrụ na nwata na ụlọ dị ezigbo mkpa, mgbe ahụ, ọtụtụ ihe dị iche iche ga-abụ ihe ịma aka ọzọ. Ndi nne ga - enwe ihe ngbu maka ikpochapu taa ma obu bu onye nlekota omenala kwesiri inwe? Ma kamakwa ihe a na-akpọ ugbo maka nwata kwesịrị ịdị. Ugbu a oge elekere nke echiche ndị na-emepụta ihe na-eche na ebe a, ọ bụ naanị nhọrọ kachasị mma.
The na-agbagha ụgbọala - nke patent 3in1 nlereanya
Ọ bụrụ na mkpebi maka nri ziri ezi na ụwa ịzụ ahịa maka ndị na-eto eto siri ike, mgbe ahụ, onye kwesịrị iburu akwụkwọ edemede nke mkparịta ụka. Ọ bụrụ na ọnụọgụgụ ụmụaka achọrọ abụghị nanị otu ma ọ bụ ụmụ abụọ, ịzụta ụdị ụgbọala ọ bụla nwere ike ịba uru. Ma maka obere ezinụlọ nwere nwatakịrị, ebe a na-enyefe nwa mberede mgbe nwa mbụ ma ọ bụ nke abụọ nye ndị enyi ya, ọ bara uru ịkwado ụmụaka. Site na njuputa mmiri ya na ngbanyeghari ya, ọ dị mma ma rụọ ọrụ, nke mere na ọ bụrụ na ị na-ejegharị na oghere akpa, a ga-ebugharị ụmụaka atọ ọ bụla nwere ike ịnya.
Ndị na-agba ígwè - ọ ga - esi mee ya
Ihe a na-emekarị bụ ihe anọ na-acha uhie uhie nke nwatakịrị nwere ike ịdina ala dị ka nwa mbụ. Tụkwasị na nke ahụ, enwere ike ịnweta oche nwa, nke a na-eji ya eme ihe na ya. Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ dị ogologo, mgbe ahụ, ọkpụkpụ ahụ nwere ụzọ ole na ole dị mfe iji rụọ ụgbọ okporo ígwè na nke a ka na-eme ka ụfọdụ ndị na-emepụta ka okpueze, n'ihi na nnyefe ka bụ akpa diaper n'otu agba dị. Ọbụna mmiri ozuzo na-ekpuchi, a na-ahụ blanket ma ọ bụ na-ejide mmanya ma na-enye aka na-eme njem na nwatakịrị ahụ n'ime mkpịsị aka ahụ obi ụtọ. Ọ bụrụ na a na-etinye akpa eriri akpa na nnyefe, mgbe ahụ, a ghaghị ịgbanye ya na-agbanwe agbanwe na ụzọ. Na nke a, enwere ike ịme ihe niile maka njem ahụ na ọbụna ịgba ọkụ nwere ike ime nke ọma ma dị mfe. Okpokoro nke nwere wiil anọ na nnukwu aka nwere ike ịdọrọ ngwa ngwa mgbe o jiri ya, nke mere na ụgbọ ala na-enweghị oche ụgbọala ma ọ bụ carcot ga-ahụ ebe ọ nọ n'ime ogwe. Enwere ike ịchekwa oche ma ọ bụ carcot na ụgbọ ala n'elu oche, ka nwatakịrị nwere ike iwepụ ebe a n'enweghị nsogbu na n'udo.
Kombikinderwagen - nke a ga-atụle na ịzụta
Ọ bụrụ na ọchịagha ahụ yiri ka ọ bụ nhọrọ kachasị mma maka ọtụtụ ezinụlọ, ị kwesịrị ịjụ onwe gị tupu ịzụta, ma ụfọdụ ajụjụ, nke na-enyere aka zere ịzụta ngwongwo. Ihe mbụ ị ga-ele anya ụgbọ ala ezinụlọ bụ ajụjụ ma onye ọkpụkpụ nke oge a na Kombistyle na-adaba n'ime ogwe. Ọ bụrụ na ị ka na-akwọ ụgbọala ebe ị na-eji ụgbọ ala ị na-emekarị, ị ga-enwe nsogbu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịtọ osisi nke stroller na akpati. Na ezinụlọ nke oge a nke ụgbọ ala dabara na nke a kama ọ kachasị mma ka ezinụlọ nwee ike ịzụta ihe ngwongwo. Ugbua ọnọdụ nke onwe gi nwere ike ime ka o choo ugboala ala di mma, n'ihi na o bu mgbe nile banyere ogwurugwu ndi mmadu ma o bu onye ga - ahọrọ uzo di n'ime ime obodo. Ma ajụjụ maka ma ụgbọala a na-adabarakwa maka iji bọs na ụgbọ oloko nwere ike dị mkpa na mkpebi ịzụta nke Kombikinderwagen kasịnụ.
Ọ bụrụ na ị na-ebi n'ala dị elu ma ọ nweghị elevator, olee otu ị ga - esi na-ahụ ihe na-agbagharị ugboro ugboro na ntụziaka nke ụlọ ahụ. Maka nke a, ụgbọ ala kwesịrị ekwesị kwesịrị ekwesị maka ịzụ ahịa na nwatakịrị. Ma eleghị anya, ọ bụghị naanị nwatakịrị na-akpọsa, ma a ga-atụ anya ejima ma ọ bụ ọbụna okpukpu atọ. Mgbe ahụ ajụjụ ahụ bilitere, nke obere ụgbọ ala nwere ike ịhọrọ ugbu a ka ụmụ niile nwee ike ịgha ụgha na-enwe obi ụtọ na nne na-akwagide ya n'enweghị nsogbu. Ma ọ bụrụ na mkparịta ụka a na-ejikọta ya na-aghọ ụgbọala, mgbe ahụ ajụjụ ọzọ na-ebilite. N'ihi na nwatakịrị a na-elezi nne anya ugbu a wee nọdụ ala ma ọ bụ kwesịrị inwe ntụziaka ahụ dịka nne. Nhọrọ ahụ na-esikwa ike maka ndị nne na-egwu egwuregwu, ọ bụ ezie na ịhọrọ ụdị ọkọlọtọ atọ nwere ike ịnyagharị maka nne na-agba ọsọ ma ọ bụ nna na-egwu egwuregwu nwere ike ịghọ ihe nlereanya nke ihe eji akpa ụmụaka. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụlite nwatakịrị gị n'ime obodo idyll, a ghaghị iburu àgwà nke taya ahụ n'uche, nke mere na ịnya ụgbọ ọhịa na osisi na nkume anaghị eduga ngwa ngwa imebi.
Kombikinderwagen - ọtụtụ uru
Ihe mbụ ị ga-ekwu bụ, n'ezie, ọnụahịa dị mma, n'ihi na ọ bụrụ na ị ga - azụrịrị akụkụ dịka mkparịta ụka jikọtara ọnụ, mgbe ahụ, nke a ga - abụrịrị ọnụ. Na mgbakwunye, ị nwere akụkụ niile n'otu agba. Ya mere, a ga-ejikwa ya na blankets na ohiri isi nye nwatakịrị ahụ, ebe ọ bụ na otu ga-achọta otu agba ahụ maka ihe niile. Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ na-etowanye, ọ dịghị mkpa ịzụta ihe ọhụụ ọhụrụ nke ụmụ ọhụrụ ma tinye ebe ọzọ na etiti. Nke a na-azọpụta ụgwọ na-etinye ụzọ maka ịzụta ihe ndị ọzọ dị mkpa maka nwatakịrị, nke a na-eji dịka afọ. Uru ọzọ bụ ndụ ogologo oge nke obere ụgbọala, ya na ụfọdụ ndị na-emepụta ihe na-edepụta ibu ruru 15 n'arọ ma jikọta ya na nwata nke afọ atọ ruo afọ atọ na ọkara. Ihe bara uru dị ukwuu bụ ihe dị iche iche na-etinye na nnyefe, ya mere, ọbụna akpa akpa akwa na ihe ndị ọzọ dị mkpa maka nwa ahụ na-ekpuchi site na ịzụta ihe ọkpụkpụ nwa ma ghara ịzụta ọnụ dị oke ọnụ.
Kombikinderwagen - enwere ike inwe ọghọm
N'ụzọ dị mwute, mgbe Kombikinderwagen nlereanya naanị a ogbe bụ ugbu a, ka na nwa ọzọ ga-ẹkenịmde na gburugburu n'ihi na a ọhụrụ etiti ma ọ bụ hà a abụọ jikọrọ stroller na-zụtara. Ngwakọta strok a na-ejikọta bụ maka otu nwa ịzụta. Site n'ịrụ ụlọ ma na-eme ka ọkpụkpụ ahụ kwụsị, nrụrụ egwu nwere ike ime ngwa ngwa. The stroller bụghị a ọkọlọtọ nlereanya, n'ihi ya, edemede nke ọzọ stroller ụdị ga-abụchaghị na onye nke stroller nlereanya. Ebe ọ bụ na nke a bụ a nlereanya na anọ wiil, nke ikeegwuregwu nne nwere ịzụta ka a jogging nlereanya na atọ wheel ọ bụla ikpe. Na nhazi niile, a na-agwa nne na nna ntụziaka nke ọhụụ n'ebe nne nọ, a gaghị agbanwekwa ya.
Ndị na-agba ígwè - ebe eji ya
A nsogbu maka ọtụtụ na-eto ezinụlọ bụ stroller mgbe eji. Ò kwesịrị iguzo na steepụ, ọ ga-abụ oke buru ibu, na n'etiti agbata bụ egwu na-ezu ohi ma ọ bụ imebisị. Kwesịrị onye ya nwayọọ nwayọọ na 5. Stock ikpuru, n'ihi na e nweghị mbuli. The Kombikinderwagen bụ obere oghere n'ogige atụrụ na mere mfe ibufe. Ma, ọ bụ kwuru ọtụtụ ugboro ịrị steepụ ruo mgbe naanị nwa, mgbe ahụ shopping na akpa na strollers na-emi odude ke ufọk na ọgwụgwụ. bụ mma n'ihi na ụlọ ebe etiti tinyere Ọdịdị na-anọgide n'ebe ndọba ụgbọala gị. Ma ọ bụ na ọ bụ naanị echekwara na eku ebe a na iwere nwa tinyere nwa saa ma ọ bụ na-ebu ikpe ndị dị ndụ na mpaghara.
Ngwongwo nke oge a - na-elezi anya ngwa ngwa na ego
ị pụrụ ịzụta Dị ka niile na ngwaahịa, price bụ ihe bụ isi na-egosi na a mma na nhazi a na-ekwe nkwa. Ugbu a kwenyesiri ike ihe, dị ka bụghị a ọnwa ole na ole ga-enwe a na-adịgide adịgide ida nke etiti na mmebi nke stroller. A ọma nkwusioru ma ọ bụ àgwà nke matarasị, ihe ọ bụla nwere ike inyere hụ na a na nwa ga-eche na karịsịa ala a stroller. Na mgbakwunye ka ihe dị mkpa mere na ihe ize ndụ na-adịghị adị na a ọma mere stroller na dara shopping, ụgbọ ala na mberede ọrụ nke a ibu nke a arọ na nwa na ngwongwo na emebi na-emekwa ka a ọhụrụ zuo dị mkpa. The nnọọ ogologo ozi ụlọ akwụkwọ ọta akara afọ-eme ka ọ dị mkpa na a stroller dị ka nke a bụ mgbe a dị nnọọ siri ike nlereanya. Ya mere, ọ bụ mgbe niile mkpa maka zuo nke ndị dị otú ahụ a stroller na ị na-atụle kpọmkwem ụdị stroller gị mkpa. A tụnyere zuo nke otu ụgbọala na-ekwesịghị ogle naanị price, ma o nwere na-atụle na-ahụ kwa ụbọchị uru.
Kombikinderwagen - nchekwa nchekwa ogige maka ịkwaga nwatakịrị
Ị kpebiri ịzụta a jikọtara stroller, nwa gị nwere ike na-anọdụ ebe a na njem nile si nwa ụlọ akwụkwọ ọta akara afọ comfortably ma ọ bụ na-edina ala. A lee anya na nso ga-iju gị otú iche iche nwere ike ịbụ a Nchikota stroller na otú ọtụtụ mejuputara ọ pụrụ inwe. Nke a pụrụ ịpụta na a ọma stroller nke ụdị ga-eri ọbụna ezi 1000 euro. A bara ezigbo uru ọ bụrụ na ị na-achọ nne na nna ochie dị ka nwa mbụ. Ebe a, ị ga-ama na anya n'ihi na ihe dị oké ọnụ ma na mma-mere ihe nlereanya, n'ihi na bụ nkịtị stroller dị nnọọ ka ọ na-eji dị ka a jikọtara nlereanya a ka ukwuu mgbe wughachiri na ya nwere ike ngwa ngwa na-edu na-eyi na emebi ma ọ bụrụ na ihe onwunwe abụghị elu mma na nhazi adịghị mma. A bara uru zuo maka expectant nne na nna, mgbe niile Efrata maka ndị nne na nna bụ n'ezie ndị bara uru.
Urbano pram stroller nwa oche oche 3in1 system oche oche oche (U2-Old Forest)
AKWKWỌ AKWCKWỌ: * Eram / Buggy * oche oche ụgbọ ala, * Akpa ụra, * Akpa akwụkwọ ozi na nkata ịzụ ahịa, * Ihe ndị mmadụ na-eche nche, * Echichi azụ na Mosquito Net, * Egwuregwu bọọlụ na ihe mgbochi nchebe.
Nchekwa: stroller tozuru oke nchekwa nchekwa nchekwa nke European EN1888, oche oche ECE R44 / 04, nke emere na European Union,
3-in-1-SYSTEM Ihe niile ịchọrọ n'otu nhazi. Site na oche oche rue akpa ahia rue bọọdụ egwuregwu. Chekwaa oge na ego n’enweghi acho ichoro n’onyinye di iche iche. Ihe anyị nwere ihe niile nwa gị chọrọ maka nchekwa na nke ọma. * Wheels na-atụgharịgharị ihu wiil ndị ahụ na-aga n'ihu na-enye gị ohere ịmegharị ụgbọ ala ọsọ ọsọ, na-atụgharị ma ọ bụ na-azụ ahịa na nnukwu ụlọ ahịa. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ime njem gaa n’ime ime obodo,
NJIKWU You nwere ike gbanwee ngwa ngwa, ngwa ngwa ma gbanwe ọnọdụ gị. You nwere ike imeghe elu windo ma ọ bụ kpoo kanopi. Gbakwunye ihe mgbochi ma ọ bụ ngwaọrụ egwuregwu. N'elu mkpuchi ụkwụ ma ọ bụ akpa ihi ụra. Na ọtụtụ ndị ọzọ.
IWU: 14 n'arọ obosara: 60 cm Height: 114 cm Aka ijiji: 83-120 cm Stroller (etiti): 35x86x61 cm (W x L x H) Oche ụgbọ ala 3,2 n'arọ mputa: 43x68x47 cm (W x L x HXX) Ngwurugwu (W x L): 25x72x97 cm
Zụrụ ya na Amazon
enyeBestseller no 2
Ogige 3 na-agba chaa chaa na 1 nọ na Megaset 10 nke na-agba ọsọ na nke XNUMX tinyere oche nwa, carcot, ụgbọala na ngwa ngwa
OMUME NIILE ✓ ngwugwu a na-eme ihe eji eme ka ihe anyi choro ghara igha, o ghaghi iso gi na umu gi rue oge umu aka. Ha abụọ bụ oche ụmụaka (maka ụgbọ ala), ebe a na-asa ahụ nwa yana oche nkwonkwo (buggy). Enwere ike ịgbanwe mgbakwunye nke stroller n'otu oge nke sekọnd. Ihe owuwu a na-ewu ewu dị mfe iji. N'ihi ịdị arọ dị ala na imewe ihe dị mfe, ị nwere ike dozichaa stroller n'ime ụgbọ ala.
Nchekwa na-ewere ọnọdụ dị mma ✓ A na-ejikọ njide a combi stroller, ị na-anọ n'akụkụ nchebe mgbe niile. Bergsteiger stroller na-agbaso ụkpụrụ nchekwa nchekwa nchekwa Europe (EU nchekwa) EN1888, nke na-akọwapụta ihe nchekwa chọrọ maka ndị na-eme ihe ngosi. Ujiri akwa niile ejiri mee ka a nwalere ya na Oeko-Tex Standard 100 ma ya mere atumatu na-enweghị mmerụ ahụ. Na mgbakwunye, dị ka onye nrụpụta, anyị na-enye ndị ọrụ nnwale a maara nke ọma oge niile ịchọpụta nnwere onwe pụọ n'ihe ndị na-emerụ ahụ.
AKWESKWỌ BM CHAKA ILMREAKA ✓ Bergsteiger Capri stroller abụghị naanị ụdị dịgasị iche iche, ọ bụkwa onye na-ahụ maka anya. Colorkpụrụ agba ọgbara ọhụrụ na njikọta na taịlị pneumatic ukwu na rimita na chrome na-eme ka a hụ ọhụụ mara mma. Ihe mgbakwunye nke ọ bụla na akpa akwa sara mbara gụnyere na mkpokọta izizi akwupụta n'ime nnukwu njiri nke stroller.
RATIO INGENIOUS PRICE / Performance ✓ Ọbụna n'oge ntụrụ ime na usoro izizi, anyị na-elekwasị anya na nchekwa, nkasi obi na imewe - na ọnụahịa dị ọnụ ala. Bergsteiger strollers na-enye njiri mara mma na njiri mara oke ọnụahịa / arụmọrụ bara ụba. Ọ bụ n’enweghị ihe kpatara na ọgụ anyị na-esiwanyewanye ike.
OGWES CR C AK CKỌ AHUR✓ stro Anwalela stroller ọtụtụ oge, ọ na - abụkwa onye mmeri ule. N'oge mmepụta, a na-etinye naanị ihe ndị ahọpụtara, nke na-adịgide adịgide, ka ị wee nwee ọ enjoyụ na stroller ogologo oge. Ọ bụrụ na nsogbu ebilite, ndị ahịa Bergsteiger na-anọnyere gị oge niile.
enyeBestseller no 3
Kinderkraft 2-in-1 stroller VEO, stroller set, braller jikọtara ọnụ, oche nkwagharị, buggy na ebucot na otu, ngwa mma, nkwusioru okpukpu abuo, nnukwu ukwu, mpịachi dị mfe, ngosi agba agba
Ihe ngwọta ọhụrụ: Gondola nke nwere ike ịgbanwe ghọọ ebe a na-eme ihe ole na ole. Ọ dị mma ma na-azọpụta ohere!
N'oge ijegharị, ịnwere ike iwelie ọnụego mmiri site na iji otu aka wee nye nwatakịrị ahụ nkasi obi, ọbụlagodi na mpaghara ala siri ike
Eku dị fechaa na ije ije abụghị ihe niile. Telescope na-emezi oke nke nne na nna. Maka nkasi obi ka ukwuu, a na-eji akpụkpọ anụ eco kpuchie ya
Mpempe na-emeghe ma na-emeghe dị mfe, na-enye gị ohere imeghe ụgbọ na sekọnd. Abụọ n'ime ụlọ na-echebe imebi ọdịda n'amaghị ama
Oche sara mbara nke buggies enwere ike idozi ya n'ọnọdụ atọ, ụkwụ ụkwụ a na-agbazi agbazi na-enye gị ohere iru ala dị larịị - dị mma maka ịra ụra
Kinderkraft 3 na 1 JULY, stroller set, combi stroller, buggy, ụgbọ ala egwuregwu, gbecot, oche nwata, oche 3, nkata ịzụ ahịa, eriri oche 5, ntụsara ahụ dị mma, ngosi agba ntụ
OMUME NIILE - N’iru umuaka nke toro umuaka gi. Na JULY 3 na 1 setịpụrụ anyị na-enweta mkpokọta ebu, oche na oche. Anyị na-eji ntụgharị ole na ole na-atụgharị ebucot ahụ n'ime eriri ahụ, na-echekwa ohere n'ụlọ na mgbe anyị na-eme njem
OLDB ERAS ASBASR - InLỌ - N’onwe ya ụzọ dị mfe ma dịkwa ngwa ngwa na - enweghị ike. Nchebe nke abụọ ka ị ghara ịmịchi / na-emeghe eriri ala
3 ATnọdụ ọdụ oche nwere ike idozi oche atọ: oche, ụgha ụgha na ụgha.
2 Ntuziaka - oche dị mma nke oche nkwụ ahụ, ịnwere ike itinye ya n'ọnọdụ nke nne / nna ma ọ bụ n'akụkụ ndị ọzọ.
SEB SETA oche, setịpụkwa oche oche strok yana ntinye maka ụmụ aka. Site na ụbọchị mbụ nke ndụ ka a na-eji ya dịka oche ụmụaka Baby ụgbọelu jee ozi
Lalalux Babyboomer light combi stroller zuru ezu setịpụrụ, multifunction stroller, foldable, sporty, global, suspending double, incl. Akpa, nchedo mmiri ozuzo na ọtụtụ ihe. Maka ụmụaka ruo ọnwa 36.
AKW CKWỌ ARM CHAKA 2M SEAKA MAKA 1in3 ma ọ bụ 1inXNUMX: yana oche oche dabara adaba (dị iche iche) dịka usoro njem maka ịgagharị na-akparaghị ókè.
AKW ANKWỌ ANTI-VIBRATION na nkwụghachi ugboro abụọ maka ịnọgidesi ike n'okporo ụzọ niile, dabara adaba maka iji apụ apụ.
MAKA ANY E NA-EZIN :TA: Ihe eji eme ka mmiri ghara ivu, ihe eji eku ume, ya na mmiri ozuzo na anwụ, akpa akwa, ihe ọ drinkụ drinkụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Nchekwa N ’AKW BKWỌ AK BBABS: BATARA: 5-belt seat, system braking system, taya roba na ngwa na ngwa niile na-aga.
6 SEnọdụ ọdụ na ịnwụ: obere, aka, mgbanwe, nwekwara ike iji ya dị ka nsogbu, enwere ike ịtọkọta ya na sekọnd.
enyeBestseller no 6
Hauck Pacific 4 shop N Drive combi pushing oche 6 iberibe ruo 25 n'arọ + oche oche + nwa saa itegharịrị oche a na-agbanwe agbanwe na mkpuchi ụkwụ, ọkụ, nnukwu ụkwụ ndị ọzọ, charlaal melange (isi awọ)
3 N’IME oche nkwonkwo nke atọ edoziri - ya na ebu nnukwu akpa
AKW BKWỌ BABY - oche oche oche ụmụaka nke Zero Plus dabara adaba site na ịmụ ruo 13 n'arọ ma kegidere n'ime ụgbọ ala jiri eriri 3-point, na-enweghị Isofix
AKW --KWỌ - enwere ike ịgbanwe mkpụkọ ibu dị na mbara oche nwere ike ịgbanwegharị, ebe mkpuchi ya na ntinye maka Fußsack enwere ike ijikọ
MANEUVERABLE - Ekelere na nnukwu wiil ndị ahụ, wiil na - emegharị na mkpọchi ihu na mkpọchi ndị na - emechi emechi, nchikota njem njem ahụ dị mfe ịgbagharị.
AKW --KWỌ - oche oche nwata ahụ Zero Plus nwere eriri atọ ma bụrụkwa ECE 3/44 nwalere; Ihe nkedo a nwere eriri nkpulu ise, a nwalere ya dika ubochi nchekwa nchekwa nke EU EN 04
Daliya Bambimo 2in1 stroller - jikọtara stroller 9 mpempe set incl. Bathlọ ịsa ahụ ụmụaka & oche egwuregwu / buggy - 1-pịa sistemụ / osisi etiti / taya roba / nchekwa anyanwụ / njide ihe ọ holdụ inụ na njikwa mara mma
Ọhụrụ Bambimo 2in1 stroller Daliya adịghị ahụcha anya ọfụma, o nwekwara njirimara niile nke ngwaahịa akpọrọ aha dị oke ọnụ na ndị ọzọ ......
Site na Bambimo combi stroller 2in1 ị nweela nkasi obi, nkwụsi ike, nchekwa na imewe ọhụụ! Enwere ike ịgbanwe mkpụgharị ahụ wee banye n'oche egwuregwu n'ime sekọnd ole na ole, yabụ na ị bụghị naanị ịchekwa ọtụtụ ohere na ogwe, ị na-agbanwegharị ma ọ bụrụ na nwa gị dina ma ọ bụ na-ehi ụra na stroller.
Kinderwagen „California“, 3 in 1 Kombikinderwagen inkl. Babywanne, Sportwagen & Zubehör, zertifiziert nach der Sicherheitsnorm EN1888, Buggy, BeigeAnzeige
Ngwugwu a na-akpọ "California" site na KINDERWAGEN-SHOP24 / Ihe ngwugwu a na-eme ka ihe ọ bụla gharazie ịbụ ihe ọchọrọ, ọ ga-esoro gị na nwa gị malite na mbido. Agụnyere oche a na-ebugharị na oche a na-agagharị agagharị (buggy) (a pụrụ ịgbanwe ebu a gaa n'oche egwuregwu, lee foto).
Nice design / The stroller "California" bụkwa anya zuru oke. Anya aluminom nke oge a jikọtara ya na nnukwu taya na-eme ka anya dị ụtọ.
Nchekwa na EN1888 / Site na onye na-adọtị anyị, ị nọ n'akụkụ nchekwa. The “stroller” California na-ezute ọkọlọtọ nchekwa nchekwa nchekwa Europe nke EN1888, nke na-akọwapụta ihe nchekwa chọrọ maka prams site na EU.
Dị nnọọ mma uru maka ego / Ọbụna n'oge ndị mmepe nke stroller bụ na echiche anyị na mbụ drafts, anyị na-elekwasị anya bụ na nkasi obi, na nchekwa, anya na na a dị ezigbo mma price-arụmọrụ ruru.
Mpempe nke nnyefe: Ahụ ịsa ahụ na mkpuchi ihu igwe enwere ike iwepu, oche egwuregwu, akwa mmiri, akpa akwa, akpa osisi na-agba agba na eriri na-agbanwe agbanwe.
enyeBestseller no 9
Ị na-eche na ihe ọma a na-akwụ na-efu nnukwu ego? Ihe ngbawa 3IN1 anyị nke Bambimo site Dalia na-egosi na ọ bụghị! Ọ bụghị naanị na ọ dị mma, ọ na-enwekwa atụmatụ niile nke ngwaahịa ndị dị oké ọnụ ahịa na ihe ndị ọzọ ...... N'iji onye na-agba chaa chaa Bambimo ị nwere nkasi obi, nkwụsi ike, nchekwa na ihe eji eme ihe n'oge a! Enwere ike ịmegharị ebubo ahụ gaa oche oche egwuregwu na sekọnd ole na ole, yabụ na ị bụghị naanị ịchekwa otutu ohere n'ime bọl,
Ị na-agbanwekwa ma ọ bụrụ na nwa gị ghagha ụgha ma ọ bụ na-ehi ụra n'ime mkpịsị ụkwụ. Atụmatụ nwa oche Age nkwanye: si mụrụ banyere 18 ọnwa ebu ikike: elu 13 n'arọ Ndidọk: Na nchekwa nke ụgbọala direction: megide ntụziaka nke ECE R44 / 04 Universal Group 0 + nkwụnye maka ojiji na stroller etiti na gụnyere 3 ebe Sistem belt Nchekwa ebube na-edozi Anya nchebe anyanwụ echefu Gbasara 3,04 KG
Nzipu: 3 na 1 stroller aluminum etiti 2 in1 nwa bath / egwuregwu oche nwa baths matarasị nwa bath ebu handle (mbughari button) nwa bath cover (mbughari, zip) nwa bath anyanwụ kanopi (4fach kemeghi, mbughari, zip) Baybyschale nwa ọhụrụ ụgbọelu nkwụnye Wickeltasche mmiri ozuzo n'echebe tree table / cup njide (nnukwu) 2 Front Front 2 Obere Ụka Ngwá Agha Nkwụsị Aka Ịzụ Ịgba Ọkụ Ọkụ (obere)
cbx 3-in-1 stroller setịpụrụ Bimisi Flex, iberibe 11 na Shima nwa oche, oche 2-in-1 na oche egwuregwu na ebu, ihe ngosi Smokey Anthracite
Optimally onwem si nwa: Nkecha na elu àgwà stroller set (11-ibe) na Kombikinderwagen (site na mụrụ 15 n'arọ), abịa na nwa ọhụrụ ala oche (si nwa ruo 13 n'arọ) na ihe ngwa - maka a na-echegbu onwe-free ndụ na elu agagharị
Sara mbara mbụ ọkọnọ: Kombikinderwagen setịpụrụ Bimisi Flex na stroller etiti, 2-in-1 oche unit (egwuregwu oche & nwa bath), na nwa oche Shima, 1x metụ akwa akpa, 2x ụgbụ anwụnta, 2x raincover, 2x windscreen (n'ihi na nwa bath / footrest na nwa oche Shima)
Gụnyere. Baby oche Shima na banyere 18 ọnwa maka ụmụaka si mụrụ (otu 0 +, 0-13 kg): ÖAMTC nwa oche ule 11 / 2018: "EZI 2,2", chekwaa na ụgbọala oche belt ma ọ bụ na-ere iche iche ISOFIX isi (Shima isi) gụnyere. nwa ọhụrụ wet
Kombikinderwagen na pivoting na kpochidoro n'ihu wiil, adụ-wheel nkwusioru, Simple ịkpakọba na a kọmpat size (x 47,5 65 96 x cm), 3 ugboro nọ ọdụ ma na-eri ukpụhọde, XXL anyanwụ kanopi, nnukwu nkata, elu kemeghi handle
Oke nnyefe: 1 combi stroller setịpụrụ Bimisi Flex (iberibe 11), akụrụngwa ihe: aluminom, mkpuchi ihe: 100% polyester, akụkụ akụkụ (LxWxH): 102 x 65 x 110 cm, setịpụrụ: 16,1 n'arọ, agba: Smokey Anthracite
Isiokwu bu nke aCat nri
metụ akwa akpa